Apple dia nandinika ny fandefasana iMessage ho an'ny Android ary nanao fanesoana | Vaovao IPhone
Toy ny isan-taona, ny andro talohan'ny volana septambra dia be ny tsaho momba ny zavatra hasehon'i Apple amin'izany hetsika izany. Fantatra sahady fa hanolotra ny iPhone 7 sy ny Apple Watch Series 2 izy ireo, saingy misy ihany koa ny tsaho milaza fa efa ela no niandrasan'ny mpampiasa maro: iMessage ho an'ny Android ho avy ihany amin'ny farany. Taorian'ilay hetsika dia tsy nijanona afa-tsy ho an'ny fitaovany ihany ny fampiharana Apple Messages, saingy misy vaovao vaovao miantoka fa Tim Cook sy ny orinasa no nihevitra ny handefa ilay kinova ho an'ny rafitra fikirakirana finday an'ny Google.
Ny vaovao vaovao dia avy amin'ny bilaogy Daring Fireball, toerana misy an'i John Gruber no nanoratra omaly tao amin'ny iOS Messages miresaka ny maha-zava-dehibe ny fampiharana fandefasan-kafatra Apple any Etazonia. Nolazainy ihany koa fa lasa zava-dehibe tokoa ny FaceTime ka miseho imbetsaka amin'ny fahitalavitra, indraindray na amin'ny anarany aza. Ary iMessage ho an'ny Android? Eny, hoy i Gruber, Apple dia nanome lanja ny azo atao.
iMessage dia tsy ho tonga amin'ny Android ... amin'izao fotoana izao
Naheno aho fa misy birdie mivezivezy manodidina ny orinasa mockup iMessage ho an'ny Android, miaraka amin'ireo fampiasa interface miainga amin'ny app iMessage ho an'ny iOS ka hatramin'ny karazana Material Design madio. iMessage ho an'ny Android dia mety tsy hahita tara-masoandro velively, fa ny fisian'ireo fanesoana amin'ny an-tsipiriany dia manome sosokevitra mafy fa tsy misy "azo antoka tsia" an'io fanambarana io.
Amin'ny tenin'i Gruber, Tsy afaka milaza izahay fa tsy ho tonga amin'ny Android mihitsy ny rindranasan'i Apple fandefasan-kafatra. Etsy ankilany, nilaza ny tompon'andraikitra iray Cupertino taorian'ny fehezanteny tamin'ny volana septambra fa tsy misy dikany ny manolotra fividianana ny fitaovan'izy ireo amin'ny sehatra hafa, saingy mety tsy hisy dikany izany raha toa ka afaka manao famindrana vola any amin'ny fifandraisana amin'ny fampiharana. Mieritreritra ve ianao / te ho lasa zava-misy i iMessage ho an'ny Android?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Apple dia nandinika ny fandefasana iMessage ho an'ny Android ary nanao fanesoana mihitsy aza
Ny PowerBeats3 Wireless dia azo vidiana ao amin'ny Apple Store an-tserasera